Maayirka Berbera Oo Xabsiga dhigay Bulsho rayid ah oo dareenkooda ka hadlay+Khilaaf Xoogan oo ka taagan deegaanka batalaale ee duleedka Berbera.
Friday February, 21 2020 - 21:19:44
Friday September 06, 2019 - 11:42:47 in by salman abdi
Maayirka degmada berbera cabdishakuur cidin ayaa xabsiga dhigay xubno ka mid ah dhalinyarada iyo odayaasha bariga gobolka saaxil oo dhawaan warbaahinta ka hadlay kuwaas oo ka soo horjeestay shirkadda sifaynta shidaalka ee dhismaheeda loo wado in laga dhigo deegaanka batalaale oo xoolo daaqeen ah.
Bulshada degan duleedka berbera ee xeebta batalaale ayaa cabasho ka muujiyey in dhulka ay xoolaha iyo reeruhu u yaalaan laga dhigo waxyaabo aanay raali ka ahayn waxaana ay arrintani sababtay khilaaf ka dhex dhaca labada beelood ee beesha bariga berbera iyo beesha uu ka soo jeedo maayirka degmada berbera.
Cabdishakuur cidin ayaa hore u xidhay xubno ka soo jeeda deegaankaasi waxaana ilaa hadda aan la garanyn sifaha ay u xidhan yihiin dadkaasi.
Odayaasha iyo waxgaradka beelaha bariga gobolka saaxil ayaa baaq ay u direen xukuumada somaliland waxay sheegeen in lagu hayo dhibaato faro badan oo ay kala kulmaan maayirka waxana ay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ugu baaqeen inay arrintaasi soo fara geliyaan.
16/02/2020 - 09:03:14